Acne ጠባ mwepụ Factory - China Acne ጠባ mwepụ Manufacturers, Suppliers
Portable OPT IPL SHR Igwe iwepụ ntutu
Skin ume ọhụrụ
Skin-acha ọbara ọbara
Skin Tone mgbazi
SHR Mbelata Ntutu
Skin rejuvenation Machines maka Aesthetic Clinics Ma Spa
• Mbelata ntutu na-adịgide adịgide
• Ọrịa Vascular
• Mmebi nke anyanwụ
• Mkpụrụ akwụkwọ Epidermal
• Ime ka akpụkpọ ahụ dị ọhụrụ
• Acne na ndị ọzọ
Igwe Ipl Multifunctional Mma Machine Spa Equipment DPL IPL Freckle Removal Skin Rejuvenation
obere SHR-950 ntutu mwepụ na igwe rejuvenation igwe
SHR-950s igwe bụ teknụzụ na-agbanwe agbanwe maka ọgwụgwọ ntutu ntutu IPL. SHR igwe na-agwakọta IPL, E-ìhè na SHR ụdị ọrụ. A na-ejikarị ya wepụ ntutu, na-adịgide adịgide Mwepụ nke ntutu, ime ka anụ ahụ dị ọhụrụ, ịcha ọcha anụ, ikpocha akpụkpọ ahụ, meziwanye akpụkpọ anụ na glossiness, iwepụ pigmentation, ect.
SHR-950 ntutu mwepụ na igwe rejuvenation igwe
A na-eji igwe SHR-950B mee ihe maka iwepụ ntutu, na-adịgide adịgide Nwepụ ntutu, ime ka akpụkpọ ahụ dị ọhụrụ, ịcha ọcha anụ, imechi akpụkpọ ahụ, meziwanye akpụkpọ ahụ na glossiness, iwepụ pigmentation, ect. SHR mode jiri nwayọ na-ekpo ntutu ntutu. Ndị ahịa na-enweta naanị mmetụta na-emetụ n'ahụ, ụfọdụ na-atụle ya na ịhịa aka ọkụ. Usoro a na-ejikwa teknụzụ In-Motion, ebe mpempe aka na-agagharị mgbe niile. Usoro a na - agwakọta diode laser ntutu mwepụ na - arụ ọrụ ụdịdị gụnyere SHR ọrụ ọrụ iji nyefee ọtụtụ gbaa mana na obere ume, iji nweta ihe na-enweghị mgbu. Usoro a kwesịrị ekwesị maka ụdị anụ ahụ niile, ọbụlagodi akpụkpọ anụ; N'adịghị ka ọdịnala Laser na IPL, SHR nwere ike ịnwe n'afọ niile na-enweghị izobe anyanwụ.
Pinxel-2s obere igwe Microneedle RF & Fractional RF igwe
A na-eji igwe a maka ihe otutu, ọnya, ahịhịa, nhichapụ ụcha, Nweghachi Skin, Nnukwu Mwepu Pore na akpụkpọ ahụ, ịmalite ihu, ịmịkpọ anụ. aka (invasive), isi jụrụ oyi, na polar na-adịghị mma.
Igwe a nwere ọnọdụ Bipolar na Mono-polar mode usoro ọgwụgwọ abụọ, Na Mono-polar mode, ike RF dị ike. Ọ bụrụ na iji Mono-polar mode, onye ọrịa kwesịrị ijide polar handpiece na-adịghị mma
Pinxel-2 Microneedle RF & Nkpirisi RF igwe
Ogwu mwepụ ihe otutu, mwepu iwepu
Mgbapụ akara akara
Nnukwu Mbelata Pore, mmegharị akpụkpọ
Ihu ihu, akpụkpọ tightening, akpụkpọ Resurfacing
picosecond nd yag laser tattoo removal igwe
Ike nke Picosecond laser nwere ike ịmịkọrọ site na melanin na-acha anụnụ anụnụ na nke ojii. Melanin ga-epekere nke pere mpe nke na sistemu lymphatic na-emegharị ha ahụ ma ọ bụ gbarie ahụ. N'ihi ya, a ga-ewepụ egbugbu ma ọ bụ ihe ọzọ na-acha odo odo n'emebighị anụ ahụ nkịtị. Usoro ọgwụgwọ ahụ dị mma ma dị mma na-enweghị nkwụsịtụ na nsonaazụ ndị ọzọ.
obere foto picosecond nd yag laser tattoo removal machine
Iji ihe mgbawa nke Picosecond Nd: YAG laser, laser na-abanye epidermis n'ime dermis nke gụnyere ọnụọgụ nke ink. Ebe ọ bụ na laser pulses na picosecond ma na nnukwu ike dị elu, ogbugba pigmenti ahụ zoro ngwa ngwa wee gbajie n'ime obere iberibe, nke a ga-ewepụ site na usoro metabolic.
Picosecond Nd: igwe na-ewepu egbugbu yaglaser
Igwe teknụzụ Laser emeela ka ikike ịgwọ ọnya melanocytic na egbugbu mejupụtara ngwa ngwa Q-switch neodymium: yttrium-aluminum garnet (Nd: YAG) laser. Ọgwụgwọ laser nke ọnya na-egbu egbu na egbugbu na-adabere n'ụkpụrụ nke photothermolysis ahọrọ. Usoro QS laser nwere ike ị nweta ọfụma ma ọ bụ kpochapụ ọtụtụ ọnya epidermal dị egwu na ọnya na-egbu egbu na egbugbu na egbugbu na obere ihe egwu nke mmetụta na-enweghị isi.
Ọrịa Co2 Laser, Co2 Fractional Laser Machine, Ems Akwara mkpali Machine, Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu, Shr Ipl Opt, otutu mwepụ mwepụ,